Indlu Entle: Onke Amalungu Elungelo Lokufikelela | December 2021
Uzihlela njani iikhabhathi zasekhitshini- Iingcebiso zokuGcina kunye neMibono yeeKhabhinethi
Ezi zimvo zokuhombisa zandisa indawo yokugcina kunye nesitayile- nokuba zincinci kangakanani iikhabhathi zakho zasekhitshini.
I-21 Eyona Ndawo iphambili ayiphalazayo -Izimvo kunye neZicwangciso zoMhle eziShedayo
Ezi shedi zintle kakhulu zezinye zeentandokazi zethu. Khuthazwa zezi zimvo zimnandi kwaye ucwangcise ezakho!
I-14 eyahlukileyo ye-DIY Shelving Ideas-Indlela yokwenza kunye nokwakha iishelfu
Yilungele ukufumana konke okusemandleni okugcina-nokuba ufuna iishelufa ezidadayo, iishelfu zentambo, okanye iishelfu zesakhelo se-A, uya kufumana into oyithandayo kwi-DIY kolu luhlu.
Iingcamango ze-Wallpaper ze-Bathroom ezingama-28 eziza kukukhuthaza ukuba ube neBold-Iphephadonga lamaGumbi okuhlambela
Funda yonke into oyifunayo ngaphambi kokuba udibanise udonga lwakho lokuhlambela kwaye emva koko uphefumlelwe yimibono engama-28 engenaloyiko kunye neyonwabisayo yokujonga iphepha lodonga.
Uluhlu lokuHlola lwaseKhaya-Izinto ezingama-30 wonke umntu ekufuneka ezigcine ekhayeni lakhe
Ukuba unayo yonke le nto ekhayeni lakho ngalo lonke ixesha, uya kuhlala ulungele iindwendwe zemizuzu yokugqibela.
Ukuthenga iGenerator: Yintoni ekufuneka uyazi, ingakanani inkcitho kunye nokunye
Kwesi sikhokelo senyathelo nenyathelo, iingcali zamakhaya zabelana ngento ekufuneka uyiqwalasele xa uthenga iijeneretha. Musa ukulinda de kube inkanyamba ibe kwisimo sezulu ngaphambi kokuba uthenge enye!
Ezona ndlu zeSitcom ziBalaseleyo: iWandaVision, iNdlu epheleleyo, iBrady Bunch, INkosana eNtsha yaseBel-Air, ndiyamthanda uLucy, kunye nokunye
Indlu entle ibeke ezona ndawo zintle ze-sitcom kwimbali yeTV, kubandakanya iindawo zokuhlala ezibonwe kuLuthando lukaLucy, iNdlu epheleleyo, iBrady Bunch, kunye neWandaVision, ukubala nje ezimbalwa.
Ngaphakathi kweWinchester Mystery House -iNdlu yaseCalifornia yaseSara Winchester
Amagumbi afihliweyo, iindlela ezifihlakeleyo, kunye nokunye: akukho nto injengekhaya elidumileyo laseCalifornia le-heiress uSara Winchester.
Ungazithengisa njani izixhobo ezisetyenzisiweyo
Nazi iindlela ezi-5 zokuthengisa izixhobo zakho ezisetyenzisiweyo, ezinkulu okanye ezincinci, ngemali eyongezelelweyo.
Ngaba iBlue Moore's Tissue Pink yeyona Umbala wepeyinti uQhelekileyo?
Ndizamile ukuzijonga kakuhle.
Imbali ye-Eggceptional yeNdlu yeWhite Roll yeqanda
Imbali iyathandeka kancinane kwimvelaphi eyiyo yeWhite House Easter Egg Roll, kodwa ukusukela ubuncinci i-1870s, abalawuli babhiyozele umsitho ngoMvulo wePasika.
Ukuthengisa umatrasi osele usetyenzisiwe-Ngaba kusemthethweni?
Ngelixa uvunyelwe ukuthengisa umatrasi osele usetyenzisiwe, kukho iimfuno ezithile ekufuneka zifezekisiwe. Nantsi indlela yokuthengisa umatrasi wakho ngendlela efanelekileyo.
Ikhitshi laseChicago elibhalwe nguSuzAnn Kletzien NgeeBold Green Cabinets
Xa umyili wabo, umyili wengingqi yaseChicago uSuzAnn Kletzein, bacebisa ukupeyinta iikhabhathi ezimhlophe lo mthunzi uyonwabisayo, olunye usapho lwaseChicago aluzange lubethe ngamehlo.
Ezona ndawo ziphambili zeConic kwiNkcubeko yePop: IDownton Abbey, Umdlalo weZihlalo zobukhosi, uHarry Potter, iTaylor Swift's 'Indawo engenanto' yeVidiyo yoMculo, kunye nokunye
Indlu Enhle iqokelele uluhlu lweyona nqaba ibalaseleyo kumboniso bhanyabhanya, umabonwakude, iividiyo zomculo, nangaphaya — kubandakanya iinqaba ezibonwe eDownton Abbey, iWizard yeOz, iifilimu zikaHarry Potter, ividiyo yomculo kaTaylor Swift, nakwezinye iindawo — ezininzi ezinokutyelelwa kunye nokutyelelwa kubomi bokwenyani!
Ukuthengisa iFenitshala kwi-Intanethi: Uyithengisa njani ifanitshala oyisebenzisileyo ukuze ufumane inzuzo
Nokuba ifanitshala yakho ikuluhlu oluqokelelweyo okanye isiqwenga esithobekileyo, unokufumana ikhaya elitsha-ngemali ethile. Iingcali ziqhekeza indlela yokufumana elona xabiso libalaseleyo kwaye uluhlu luluhlu luni.
Ukutyelela i-Modern Seattle Treehouse eyenzelwe ngu-Andy Beers
Ukutyelela le ndlu yase Seattle yomthi eyenzelwe u-Andy Beers we-Ore Studios kwaye uqaphele zonke iimfihlo zakhe kwindlela yosapho enobuhlobo yokuhombisa.
Uyithengisa njani impahla yakho yasekhaya kwi-Intanethi
Ukusuka kuSihlalo ukuya kwiMercari, ezi zezona webhusayithi zibalaseleyo kunye neeapps zokuthengisa izinto zakho ezincinci zasekhaya ngemali.
Iindleko zangaphakathi zoyilo: Leliphi ixabiso lokuQesha uMyili olungileyo?
Xa kufikwa kuyilo lwangaphakathi, akukho ndlela inye yokubala ibhilikhwe-abanye abayili babiza iyure nganye, abanye umrhumo othe tyaba, abanye umaki kwizinto abazithengela zona (zihlala zisebenzisa izaphulelo ezizodwa, ezorhwebo kuphela). Nalu ulwahlulo.
Iindlela ezili-14 ezilula zokuLungisa kwakhona iKhaya lakho ngaphandle kokuchitha imali
Ukusuka ekuhleleni kwakhona ifanitshala yakho, kwiiprojekthi ze-DIY kunye nokubuyisela kwakhona iishelfu zakho, abayili babelana ngeengcebiso zabo ezilungileyo ekubuyiseleni kwakhona ikhaya lakho ngaphandle kokuchitha imali.
Uyithengisa njani iFenitshala esetyenzisiweyo, oomatrasi, kunye nayo yonke into eNdlwini yakho
Ngolwazi oluchanekileyo, ungathengisa into entle kakhulu ekhayeni lakho: ifanitshala, izixhobo zombane, izinto zetafile, izibane, iiragi, izixhobo-nkqu noomatrasi.
uyilo lokukrola kwamathanga
iikiti zokugcina iimpahla
ikhaya le-2020 hgtv
Umququzeleli wedrowa ekhitshini ikea